“Waan Ogahay, Ninkii Damac Ka Hayo Inuu Somaliland Khalkhal-Geliyo Oo Talo Muqdisho Leedahay Soo Dhex-Dhigo..” Cukuse | Dhamays Media Group
“Waan Ogahay, Ninkii Damac Ka Hayo Inuu Somaliland Khalkhal-Geliyo Oo Talo Muqdisho Leedahay Soo Dhex-Dhigo..” Cukuse
Hargeysa (Dhamays) – Wasiirka Wasaaradda Xanaannada Xoolaha Somaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse), ayaa ka hadlay Rabshado Habeen hore ka dhacay Magaalooyinka Dalka qaarkood, kuwaasi oo sababay Dhimasho iyo dhaawac.
Wasiir Cukuse oo Maanta Shir-jaraa’id ku qabtay Magaalada Hargeysa, ayaa isagoo daba-socda Hadallo ka soo yeedhay Masuuliyiin ka mid ah Xisbiga WADDANI oo Cabasho ka qaba Codadkii laga dhiibtay Doorashada Madaxtooyada oo ay Qaybo ka mid ah ay Shaki ka qabaan, hadalladaasi oo ah kuwa Sababay Rabshado ay sameeyeen Taageerayaasha Xisbigaasi, ayuu Wasiir Cukuse ka digay in Dalka amnigiisa khalkhal la geliyo.
Wasiirka Xanaannada Xoolaha Somaliland oo ugu horreyn ka hadlay waxa Doorashadii Madaxtooyada ee Isniintii dhacday kaga duwanayd kuwii hore ayu yidhi “Berigii hore qaybo ka mid ah Dalka ayaynu Doorashooyinka ka qaban jirnay, waad ogaydeen Dad iyo Dal faro badan baa innaga maqnaa oo aan ka qayb-geli jirinm Doorashooyinka. Laakiin Maanta Madaxweyne Axmed-Siilaanyo iyo Xisbiga KULMIYE waxay ku guuleysteen in Dalka jamhuuriyadda Somaliland iyo Dadkiiba inay dhan yihiin oo aanu jirin Dal, Dad iyo beel innaga maqan. Kooxihii siyaasadeed iyo Jabhadihii Dalka gudihiisa ku kala aragti duwanaa oo dhami Maanta iyagoo isku dhan ayay ka mid yihiin Talada Dalka oo ay joogaan, ummaddiina waxay ka codaysay Taleex illaa Saylac. ILAAHAY Mahaddii waa wax lagu faano, waa wax ay Dafiri kari waayeen kuwa aynu is hayno ee Soomaaliya, oo aad ogtihiin inay Hambalyeeyeen (Doorashada Somaliland), waad ogtihiin Baarlamaanka Ingiriiska iyo Dunida kale oo dhami ka hadleen Doorashadeena, waad ogtihiin in Saxaafadda Adduunka kuwii ugu afka dheeraa ay wax ka qorayaan Doorashadeena.”
Wasiir Cukuse wuxuu Shir-jaraa’id kaga Faallooday qaabkii Doorashadu u dhacday iyo sidii ay u daah-furnayd “Doorashadu waxay u dhacday si Xor iyo Xalaal ah. Komiishanku dedaal faro badan ayuu sameeyay, Xukuumadduna dedaal bay samaysay, oo bari ilaa galbeed ayay Amniga Dalka Sugtay, ILAAHAYNA wuu la qabtay, ilaa Maantana Natiijadii Doorashadu may soo bixin, laakiin Maxaa dhacay ? waxa dhacay Talo-xumeyaal ayaa doonaya inay Dalka qaybo ka mid ah geliyaan wax rabshad u eg. Waad ogaydeen Qaybo ka mid ah Magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceerigaabo waxa ka dhacay Mudaharaaddo aanu ifafaalahoodu fiicnayn, laakiin waxaanu leenahay Dalkan Dagaal sokeeye oo Dambe kama dhacayo. Dagaal sokeeye oo Dalkan ka dhaca waxa ugu dambaysa 1994-kii, Inan dambe oo Waxbarashadiisa ku waaya oo Qoxooti labaad gala, oo Hargeysa, Burco iyo Ceerigaabo laga baxo. Wallaahi in aanay dhacayn ilmo yar oo inta Gurigooda laga saaro Waxbarashadiisa seegta iyo Umul dambe oo intay Xalay umushay, Saakana la yidhaahdo Ilmahaaga Ilkaha ku qaado ma dhacayso, sabab ay u dhacdo ayaan jirin, ma Dal ayaynu xoraynaynaa Mise Innamo wada Reer Sheekh Isaxaaq ah oo tartamay awgeed buu dhiig u daadanayaa.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “Saddexda Musharrax waa isku Qoys, kii helaana waa kii kale, waana Madaxdii Dalka, marna dhiig ku daadan maayo, Jamhuuriyadda Somaliland-na way jiraysaa. Ninkii Damac ka hayo inuu Tan Khalkhal-geliyo oo Talo Muqdisho leedahay soo dhex-dhigo, dabadeedna uu yidhaahdo halkan ayay Rabshado ka dhow yihiin, adeer Suurto-gal kuuma aha.”
Wasiirku wuxuu farta ku fiiqay Dad ka mid ah Xisbiga WADDANI oo uu sheegay inay damacsan yihiin in Somaliland dhibaato ka dhacdo, waxaanu yidhi “Waan ogahay, inta badan ee WADDANI joogta ee Talo-qabeenka ah, ee Waayeelka ah, ee Ganacsatada ah, ee Culimada ah, ee siyaasiyiinta ah ee sidan aanu uga damqanayno si la mid ah uga damqanaya waxa dhacaya, laakiin waanu ognahay inta tirada yar ee doonaya inay Nidaam kale uga faa’ideeyaan.”
Ugu dambayn, Wasiirku wuxuu la dardaarmay Dhallinyarada “Dhallinyarada waxaan leeyahay, waa idinka kuwa leh mustaqbalka, waa idinka kuwa la doonayo in lagu ciyaaro wakhtigooda, waa idinka kuwa la doonayo in Wakhtiga lagu dhaafiyo waxay berri qoomameeyaan, midna ogaada Labada Musharrax ee Maanta isku qabta waad I boobtay inaad arki doontaan iyagoo Bunka wada cabbaya marka dhowr idinka mid ahi dhintaan ee la aaso.”ayuu yidhi
Previous: Suldaanka Guud Ee Beelaha Somaliland Oo Ka Hadlay Rabshado Taageerayaasha WADDANI Dhigeen Oo Khasaare Ka Dhashay
Next: Caafimaad Darrooyinka Moobaylku Dhaliyo iyo Daawooyinkooda